Miss People Style Competition and Me! | The World of Pinkgold
tint on September 22, 2008 at 2:35 pm said:
စိုးပြဲပြဲအောင်နဲ့အမ်ခါးယားဆိုတဲ့ နာမည်တွေတော့ကြိုက်တယ်
khit on September 22, 2008 at 7:16 pm said:
MrDBA on October 2, 2008 at 3:42 am said:
11 Oct ဆိုတော့ ရန်ကုန်မှာ ရောက်နေလောက်ပြီ။ ကြည့်ချင်လိုက်တာ
Pinkgold on October 2, 2008 at 8:35 am said:
Mr DBA.. လာခဲ့ပါရှင်. ရုံးမှာ Ticker လာထုတ်လို့ ရပါတယ်.. တစ်ယောက်ကို နှစ်စောင်နှုန်း ထုတ်ပေးပါတယ်.. လပြည့်ဝန်း ပလာဇာ (10) ထပ် People ရုံးခန်းမှာပါ